Ny Tsenan’ny Tanànakely Thandaung Ao Amin’ny Fanjakana Shan Ao Myanmar · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Jolay 2017 18:28 GMT
Vakio amin'ny teny Français, বাংলা, Italiano, नेपाली, Español, English
Ny tanànakely Thandaung, tokony ho adiny iray miala ao Nyaung Shwe, any andrefan'ny Farihy Inle. (Sary sy fanazavana avy amin'i Chan Son / The Irrawaddy)
Tao amin'ny The Irrawaddy, vohikalam-baovao tsy miankina ao Myanmar, ity lahatsoratra an-tsary avy amin'i Chan Son ity ary navoaka indray eto amin'ny Global Voices fa tafiditra ao anatin'ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Malaza amin'ny maha-tsenan'ny tantsaha azy sady feno olona ny tsena dimy andro mifindrafindra toerana manodidina ny faritry ny Farihy Inle ao amin'ny Fanjakana Shan, ary ahitana ireo mpivarotra avy amin'ny fiaviana samihafa , anisan'izany ny Intha sy Pa-O, ary mifindrafindra monina isan'andro avy amin'ny toerana samihafa mba hivarotra ny vokany sy ny entany.
Raha maro ny tanànakely manamorona ny farihy toa an'i Indein, Nampan, Thaung Tho sy Khaung Daing izay mandray ny tsena, dia ireto toerana dimy ireto no tena malaza momba izany toa an'i Nyaung Shwe (Yawnghwe), Heho, Taunggyi, Maing Thauk sy Shwe Nyaung. Manaraka ny volana ny fanisanandron'ny tsena : tsy misy ny tsena amin'ny fenomanana sy ny maizim-bolana.
Tsy dia manana tsena ho an'ny fizahantany noho i Indein sy Nampan izay ahafahana mahita tsara ny varotra ao an-toerana ny tanànakely Thandaung any andrefan'ny farihy, tokony ho adiny iray raha miala avy any Nyaung Shwe. Tonga vao mangiran-dratsy ny mpivarotra mba hanomana ny tontolo andro, ary matetika maharitra mandra-pahatongan'ny mitataovovonana ny tsena.
Tsy dia manana tsena ho an'ny fizahantany noho ny mpifanolo-bodirindrina aminy ao Indein sy Nampan i Thandaung . (Sary sy fanazavana avy amin'i Chan Son / The Irrawaddy)
Dimy minitra miala eo amoron'ny farihy raha mandeha an-tongotra ny tsena Thandaung . (Sary sy fanazavana avy amin'i Chan Son / The Irrawaddy)
Mpivarotra voninkazo ao an-tsenan'i Thandaung. (Sary sy fanazavana avy amin'i Chan Son / The Irrawaddy)
Mpivady manefy vy ao amin'ny tsena . (Sary sy fanazavana avy amin'i Chan Son / The Irrawaddy)
Lehilahy manoloana ny tsena fivarotana akoho. (Sary sy fanazavana avy amin'i Chan Son / The Irrawaddy)
Toerana manodidina ny làlana mankany amin'ny tsena Thandaung miala eo Nyaung Shwe . (Sary sy fanazavana avy amin'i Chan Son / The Irrawaddy)
Ho any amin'ny tsenan'ny Thandaung vao maraina ny vehivavy iray . (Sary sy fanazavana avy amin'i Chan Son / The Irrawaddy)